Iindaba -Siza kuchaza iinzuzo ezizodwa zokuveliswa kwamandla kweSolar Photovoltaic
1. Amandla elanga ngumbane ococekileyo ongenakutshiswa, kwaye amandla ombane avela elangeni akhuselekile kwaye athembekile kwaye akazukuchaphazeleka yingxaki yamandla kunye nezinto ezingazinzanga kwimarike yamafutha;
2, ilanga likhanya emhlabeni, amandla elanga afumaneka kuyo yonke indawo, ukuveliswa kwamandla kwelanga kwe-photovoltaic kulungele ngokukodwa iindawo ezikude ngaphandle kombane, kwaye kuya kunciphisa ulwakhiwo lombane wamandla omgama omde kunye nelahleko yokuhambisa umbane;
3. Ukuveliswa kwamandla elanga akudingi mafutha, okunciphisa kakhulu iindleko zokusebenza;
4, ukongeza ekulandeleleni, ukuveliswa kwamandla kwe-photovoltaic yelanga akunazinto zihambayo, ke akukho lula ukonakalisa, ukufakela kulula, ulondolozo olulula;
5, ukuveliswa kwamandla kwe-photovoltaic yelanga akuyi kuvelisa nayiphi na inkunkuma, kwaye ayiyi kuvelisa ingxolo, i-greenhouse kunye neegesi ezinobuthi, zinamandla acocekileyo. Ukufakwa kwenkqubo yokuvelisa amandla ye-1KW ye-photovoltaic kunokunciphisa ukukhutshwa kwe-CO2600 ~ 2300kg, NOx16kg, SOx9kg kunye namanye amasuntswana nge-0.6kg minyaka le.
I-6, inokusebenzisa ngokufanelekileyo uphahla kunye neendonga zesakhiwo, akukho mfuneko yokuba uthathe umhlaba omninzi, kwaye iipaneli zokuvelisa amandla elanga zinokufumana ngokuthe ngqo amandla elanga, kwaye zinciphise ubushushu beendonga nophahla, ukunciphisa umthwalo umoya ongaphakathi endlwini.
7. Umjikelo wolwakhiwo lwenkqubo yokuveliswa kwamandla kwe-photovoltaic mfutshane, ubomi benkonzo yamacandelo okuvelisa amandla inde, imo yokuvelisa amandla iyaguquguquka, kwaye umjikelo wokubuyiselwa kwamandla kwenkqubo yokuveliswa kwamandla mfutshane;
8. Ayikhawulelwanga kulwabiwo lwejografi lwezixhobo; Umbane unokuveliswa kufutshane nalapho usetyenziswa khona.